Mpanamboatra sy mpamatsy varavarana kabinetra - Pabrikan'ny fantsom-baravarankely China
Varavarana kabinetra Tena malefaka akaiky ny takona afenina
Varavarana kabinetra tena malefaka akaiky miafina nafenina vita amin'ny fitaovana firaka zinc. Ity savily ity matetika dia ampiasaina amin'ny varavaran'ny kabinetra vita amin'ny aliminioma. Ny hinge tena nafenina amin'ny savily fanaka nentin-drazana. Tsy ho hitanao ny vatan'ny hinge eo amin'ny tabilaon'ny lafiny kabinetra. Ataovy bika tsara ny kabinetra fanakao. Raha liana amin'ny hinge anao ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
H11 Karazan-tsarimihetsika fohy vita amin'ny sandry fohy karazana amerikana 1/2 overlay
Fampidirana:H11 Amerikana karazana endrika fohy sandry amin'ny endriny fohy ampiasaina 1/2 ho an'ny valizy lakozia sy kabine fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
US2D12 hinge fanitsiana karazany amerikana 2D
Fampidirana:US2D12 karazana amerikana fanitsiana 2D amerikana ampiasaina matetika amin'ny vatan-dakozia sy efitrano fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
US2D12S 2D malefaka mifanakaiky amin'ny vatan-tarehy Hinge 1/2 ″
Fampidirana:US2D12S 2D malefaka mifanakaiky amin'ny vava tarehy mihintsy 1/2 ″ matetika ampiasaina amin'ny fonosana tarehy sy vata fidiovana Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Hinge Face Frame miafina 3/4 ″ ho an'ny kabinetra karazana amerikana
Fampidirana:Takelaka takona miafina 3/4 ″ ho an'ny kabinetra karazana amerikana matetika ampiasaina amin'ny vatan-damba sy efitrano fidiovana tarehy. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
US2D114 hinge fanitsiana karazany amerikana 2D
Fampidirana:US2D114 hinge fanitsiana karazany amerikana 2D matetika ampiasaina amin'ny vatan-dakozia sy vata fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
3D fanitsiana endriny endrika hinge 1 santimetatra fanamiana ho an'ny lakozia sy ny kabine fidiovana
Fampidirana:3D fanitsiana endriny endrika hinge 1 mirefy takelaka ho an'ny lalimoara an-dakozia sy fidiovana, tsy misy fanidiana malefaka, 1 ″ sarona, vy vita amin'ny vy, voaravaka nikela. Miaraka amina lamina loaka 45mm, visy tanana amin'ny fampiharana. Fanitsiana Cam sy vakizoro 4 ho an'ny fametrahana mora eo amin'ny sisin'ny endriny. Ny fonosana mahazatra dia tsy misy visy, fonosana betsaka ao anaty baoritra.
US3D1S karazana Amerikanina fanitsiana 3D hinge ara-dalàna
Fampidirana:US3D1S karazana amerikana 3D fanitsiana mahazatra hinge matetika ampiasaina amin'ny vatan-tarehy tarehy sy ny kabine fandroana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
3D savily azo ovaina ho an'ny vatan-kazo tarehy tarehy 1/2 ″
Fampidirana:3D Azo ahodina amin'ny varavarana mihidy ho an'ny kabinetran'ny endriny 1/2 "matetika ampiasaina amin'ny vatan-dakozia sy vata fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
1/2 raulic Hydra malefaka akaiky 3D azo ovaina ao an-dakozia endriny fametahana kabinetra
Fampidirana:1/2 raulic Hydra malefaka akaiky 3D azo ovaina ao an-dakozia volo baravarankely fantsom-baravarankely ampiasaina matetika amin'ny vatan-damba sy kabine fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
1-1 / 2 ″ varavarana hidroleta fametahana akaiky kokoa ho an'ny vatan-daboara sy efitrano fidiovana
Fampidirana:1-1 / 2 ″ varavarana hidroleta mifatotra akaiky kokoa ho an'ny vatan-damba sy efitrano fidiovana matetika ampiasaina amin'ny fonosana tarehy sy vata fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
1-1 / 4 ″ Overlay 105 Degre 2 Cam Press ao amin'ny Hinge Cabinet Frame Face
Fampidirana:1-1 / 4 ″ Overlay 105 Degree 2 Cam Press amin'ny Face Frame Cabinet Hinge izay matetika ampiasaina amin'ny fonosana tarehy sy vata fidiovana. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay.